Mozila dia mividy Pocket, serivisy mamonjy lahatsoratra hovakiana ao aoriana | Vaovao momba ny gadget
Mozila dia mividy Pocket, serivisy mitsitsy lahatsoratra hovakiana ao aoriana
Ny sain'ny rehetra na saika manerantany dia mifantoka amin'izao andro izao amin'ny Mobile World Congress izay tanterahina ao Barcleona, fa eo an-tsisin'ity hetsika ity dia mipoitra ny vaovao lehibe toa ilay fantatsika tato anatin'ny ora vitsivitsy. Misy ifandraisany izany fividianana serivisy Pocket malaza avy amin'ny Mozilla Foundation.
Pocket dia serivisy misy mpampiasa 10 tapitrisa mahery, misy amin'ny sehatra maro samihafa, ary ahafahantsika mitahiry lahatsoratra hamaky azy ireo any aoriana sy amin'ny fotoana rehetra. Ny fahatsorana sy ny fampiononana dia roa amin'ireo antony mahatonga azy ireo hanana mpampiasa be dia be.
Amin'izao fotoana izao, tsy dia be loatra ny fampahalalana momba ny fifanakalozana mividy nipoitra, na dia nanamafy izany aza ny Mozilla Foundation Hanohy hiasa tsy miankina ny paosy, ary amin'izao fotoana izao dia toa tsy misy fiovana lehibe.
Ilay hanana fiovana hafa dia ny tranokala Firefox, novolavolain'i Mozilla, izay iray amin'ireo voalohany nampiditra ny Pocket, ary mety hanana an'io serivisy io amin'ny fomba hafa. Mba eritreretina ihany koa fa ny fanovana dia hahatratra ireo mpanamory sy sehatra hafa izay mampiasa ny serivisy hamonjy lahatsoratra.
Pocket dia efa fananan'ny Mozilla Foundation, ary ankehitriny dia tsy mila mahafantatra antsipiriany isan-karazany momba ny fividianana fotsiny izahay, ary ny fampahalalana vitsivitsy momba ny hoavin'ity serivisy ity ary matahotra mafy aho fa afaka fotoana fohy dia ho hitantsika ny fomba ahafahan'ny rindrambaiko maimaimpoana misy sy misy saika ho an'ny olona rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Mozila dia mividy Pocket, serivisy mitsitsy lahatsoratra hovakiana ao aoriana
Hitanay ny fiasan'ny Samsung Galaxy S8 amin'ity famoahana horonantsary ity
Ny Xiaomi Mi 5C dia efa zava-misy ary manana processeur an'ny Xiaomi manokana